China Threaded Type နှစ်မျိုးလုံးရော်ဘာတိုးချဲ့မှုကိုပြည်ထောင်စုထုတ်လုပ်သူနှင့်ပေးသွင်းသူနှင့်အတူ | ကွမ်းခြံကုန်း
1. Threaded အမျိုးအစားနှစ်ထပ်နယ်ပယ်ရော်ဘာတိုးချဲ့ပူးတွဲပြည်ထောင်စုနှင့်အတူ
3.Type: Dual- ဘောလုံးကို, Threaded
4. ဆက်သွယ်မှု: ပြည်ထောင်စု
6.Joint ပစ္စည်း: NBR ရော်ဘာ, EPDM ရော်ဘာ, NR ရော်ဘာ, CR ရော်ဘာ, BUtadiene ရော်ဘာ
8. ဖိအား: PN10 / PN16 / PN25
၉. လည်ပတ်မှုအပူချိန် - -40 ° C မှ 80 ° C (မြင့်မားသောအပူချိန်ခံနိုင်သည့်ရာဘာအဆစ်များကိုလည်းပြုပြင်နိုင်သည်)
၁၂။ မူလနေရာ - Hebei, China (Mainland)
မြင့်မားသောအတွင်းပိုင်းသိပ်သည်းဆ၊ မြင့်မားသောဖိအားဒဏ်ခံနိုင်မှု၊ ကောင်းသော elastic သောပုံပျက်သောအကျိုးသက်ရောက်မှု၊ တုန်ခါမှုလျှော့ချခြင်း၊ ဆူညံသံကိုလျှော့ချခြင်း၊ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ကောင်းမွန်စွာအသုံးပြုနိုင်ခြင်း။
ဝက်အူပန်ကာကွိုင်၏ရော်ဘာ connector ကိုလည်းဝက်အူချည်၏ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရော်ဘာ connector ကိုအဖြစ်လူသိများသည်။ ၎င်းသည်မြင့်မားသော elasticity၊ မြင့်မားသော air tightness၊ အလယ်အလတ်ခုခံနိုင်မှုနှင့်ရာသီဥတုခံနိုင်ရည်ရှိသည့်ပိုက် connector တစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ပိုးခေါက်ရာဘာပျော့ပျောင်းသောပူးတွဲရော်ဘာ elasticity၊ မြင့်မားသော air tightness၊ အလယ်အလတ်ခုခံမှု၊ မြင့်မားသောဖိအားမြင့်မားသောအပူချိန်မှို vulcanization မှတဆင့် polyester ကြိုးထည်ဆင်ခြေလျှောနှင့်၎င်း၏ပေါင်းစပ်၏အစွမ်းသတ္တိကို, အအေးနှင့်ပူတည်ငြိမ်မှု။
ပင်လယ်ရေ၊ ရေချို၊ ရေပူ၊ ရေအေး၊ သောက်ရေ၊ အိမ်တွင်းမိလ္လာ၊ ရေနံစိမ်း၊ လောင်စာဆီဆီ၊ ချောဆီ၊ လေ၊ လေ၊
ရှေ့သို့ Flange နှင့်အတူနှစ်ထပ်ရော်ဘာတိုးချဲ့ပူးတွဲ
Flange နှင့်အတူတစ်ခုတည်း Sphere ရော်ဘာတိုးချဲ့ပူးတွဲ